आर्यन–साम्राज्ञीका ६ आत्मिय तस्बिर « Ramailo छ
आर्यन–साम्राज्ञीका ६ आत्मिय तस्बिर
अहिले अलि छायाँमा परे पनि केही अघिसम्म हिरो आर्यन सिग्देलको जगजगी थियो । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह त यो समयकी हटकेक भइहालिन् । दुई फरक समयका यी दुई प्रिय कलाकार एक साथ देखिएका छन्, ‘कायरा’मा ।
आर्यनलाई आफ्नो बचेको साख फिर्ता ल्याउनु छ । यो फिल्मका उनी अभिनेता मात्र होइनन, निर्माता पनि हुन् । साम्राज्ञीलाई नयाँ हिरो मात्र होइन, आफूभन्दा सिनियर हिरोसँग पनि आफ्नो जोडी जम्छ भनेर प्रमाणित गर्नुछ । अनि, बिर्साउनु छ, ‘तिमीसँग’को असफलताको पीडा । त्यसैले दुवैलाई कायरा उत्तिकै अर्थपूर्ण छ । यही प्रतिक्षित फिल्मको ट्रेलर लञ्च गरियो आइतबार । जहाँ आर्यन र साम्राज्ञी दुवै ‘कुल’ देखिए ।
रातो ह्याट, चस्मा र ग्रिन क्याजुअल हुडीमा सजिएका आर्यन र डबल र्याप वान पिसमा सजिएकी साम्राज्ञी निकै आकर्षक देखिएका थिए । जब उनीहरु नजिकीए फोटोपत्रकारको क्यामेरा सोझिहाल्यो । र, दुवैले बडो ‘कम्फर्ट’ भएर तस्बिर खिचाए । तस्बिर हेर्दा लाग्छ त, उनीहरुबीच १४ वर्षको उमेर अन्तर होला ?
तपाईलाई चाहीं आर्यन–साम्राज्ञीको ‘केमेस्ट्रि’ कस्तो लाग्यो ? हेर्नुस्, यो जोडीका आधा दर्जन आत्मिय तस्बिर । तस्बिर : कुशल घतानी राई